jeudi, 16 juin 2016 14:42
Doany Miarinarivo Mahajanga : Rasoamody no Ampanjakabe vaovao
Ny alatsiniainy teo no nampafantarina ny Fokonolona sy ny Olobe tao amin’ny Doany Miarinarivo Mahajanga ny Ampanjakabe Boeny vaovao Rasoamody, izay taranaka Ampanjaka avy any Befotaka. Izy no madimby ny Ampanjaka Jaofeno Richard.Ranitra roa avy any Betsioka no nitondra ny Ampanjaka vaovao tao amin’ny Doany Tsararano io alatsiniainy io.
mercredi, 15 juin 2016 16:29
Dr Jean Louis Robinson : Avelao hifety ny Malagasy
Raisin'ny Dokotera Jean Louis Robinson ho fanakorontanana ny filaminanan'ny vahoaka Malagasy ny fikasan'ny fitondrana hisambotra ny kolonely Lylison René de Roland.Tsy mitombina raha ny fijerin'ity filohan'ny antoko Avana ity ny filazana fa tratra nanao heloka bevava ny loholona Lylison.Avelao hoy izy ny vahoaka malagasy hifety am-pilaminana ao anatin'izao faha 56 taona niverenan'ny fahaleovantena izao.Tokony hajanona ny adilahy politika hoy izy fa efa sempotry ny krizy ny vahoaka Malagasy.
mercredi, 15 juin 2016 15:10
BIANCO : Nanatontosa hetsika ara-panatanjahan-tena
Nanao hetsika ho fiadiana amin'ny kolikoly ny BIANCO na ny birao miady amin'ny kolikoly, tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina io maraina io. Nisy ny lalao Basket-ball izay nihaonan'ny Lycée Ampefiloha sy ny Sekoly Katolika Soanierana ho fanamarihana izany hetsika izany.
mercredi, 15 juin 2016 13:51
Nolokoina ny Kianjan'ny Mahamasina handraisana ny 26 Jona.
lundi, 13 juin 2016 21:46
Mpangalatra lavon'ny mpitandro filaminana
Lehilahy roa no lavon'ny mpitandron'ny filaminana tetsy Ankadivato vokatry ny fifampitifirana rehefa narahina hatramin'ny omaly ary nifanenjehina androany. Fantatra fa nitondra fitaovam-piadiana izy ireo, ary misy amin'izany basy izany aza no an'ny mpitandro filaminana, izay eo ampanaovana fikarohana momba izany moa ny polisim-pirenena. Antenaina mba ho lazaina ampahibemaso amin'izay ireo mpitandro filaminana voarohirohy amin'itony famoahana basy omena ny mpanao ratsy itony, raha tena vonona marina ny polisim-pirenena hiady amin'ny kolikoly.
vendredi, 10 juin 2016 23:24
Nibetroka ny Namana Rossy
Nanafatrafatra mafy an'ny fitondram-panjakana i ROSSY ny tsy hikitikitihina an'i Lylison raha izy nampirevy ny ministeran'ny serasera teny fenoarivo io hariva io, tsy hiditra resaka politika aho hoy ROSSY fa aza kitihina ny namanay.
vendredi, 10 juin 2016 11:20
Andron'ny asa tanana : Ankalazaina ao Antsirabe
Antsirabe no nankalazana ny Andron'ny asa tanana eto Madagasikara. Tonga manome voninahitra izany ny minisitry ny kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana, Rabenirina Jean Jacques. Trano heva maromaro no mampiranty ny vokatra vitan'ireo mpanao asa tanana. Mandritra ny telo andro no hankalazana izany ao Antsirabe.
jeudi, 09 juin 2016 10:53
9 jona : Andro iraisam-pirenena ho an'ny "Archives"
Tsara ny manangona sy mitahiry ireny "archives" ireny, indrindra ireo boky sy ireo rakitsoratra samihafa mba ho fantatr'ireo taranaka aty aoriana. Ilaina ihany koa ny mitsidika ny toerana fanangonana azy ireny.
jeudi, 09 juin 2016 09:52
"Lutte contre la douleur" : Haharitra efatra andro ny hetsika
Nosantarina tetsy anoloan’ny vavahadiben’ny Mahamasina omaly ny hetsika hiadiana amin’ny fanaintainana (Lutte contre la Douleur) izay atao manodidina an'Antananarivo ary haharitra efatra andro.
jeudi, 09 juin 2016 09:36
EPS Bac : Mitohy ny adina
Mbola mitohy hatrany ny taranjam–panadinana ara-panatanjahantena Bakalorea. Nizotra ara-dalana ny teny amin’ny kianjan’ny Mahamasina.
Page 457 sur 515